Dibad baxayaal Gubay Barlamaanka Burkino Faaso - Wargeyska Faafiye
Dibad baxayaal Gubay Barlamaanka Burkino Faaso
Wararka ka imanaya dalka Burkina Faso ayaa sheegaya in rasaas laga maqlayo meel u dhow madaxtooyada dalkaasi, ka dib markii goobtaas ay ka dhaceen mudaharaado kala duwani, waxaana dadka isu-soobaxa samaynayaa ay dab qabadsiiyeen dhismaha baarlamaanka.
Xiisadahan ka curtay dalka Burkina Faso ayaa yimi ka dib markii golaha sharci-dejintu uu soo jeediyey in wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyo dastuurka dalkaas, waxaana isbedelka cusub ee dastuurku uu fursad u siinayaa madaxweynaha dalkaas hoggaamiya inuu sii korodhsado muddo xileedka uu xafiiska joogay . mida kale ciidamada boolisku ayaa isticmaalayey suntan dadka kaga ilmaysiisa iyo biyo xoog badan si ay banaanbaxayasha uga saaraan dhismaha baarlamaanka, laakiin dadka mudaharaadayey ayaa soo jabsaday xayn-daabkii loo sameeyey isla markaana buuxdhaafiyey dhismaha baarlamaanka.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsGrowing concern for missing Birmingham boy.Muungaab oo saldhigyada booliska u jeediyay inay ka amar-qaataan maamulka.Xiriirka nabad sugida iyo Al-ShabaabDastuurka Cusub: Cutubka 2aad JinsiyaddaNinkii dilay malaaqii Bay iyo Bakool.